တစ်ဦးကဂျီဘရောလ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကမူလက "ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်ဆောင်မှုအတွက်ယာဉ်များ" အဖြစ်မူလအမြစ်ကိုသတ်မှတ်ပေးသော 1999 ၏ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းက Ordinance ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ 2010 များ၏ဂျီဘရောလ်ဝင်ငွေခွန်အက်ဥပဒေကိုး စား. ကဲ့သို့တူညီသောရိုးအမြစ်ကိုခွဲခြား။ ရိုးအမြစ်ကိုတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကာကွယ်ထားပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူသီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။ ရိုးအမြစ်ကိုတစ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တစ်ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။
2017 ၏ဧပြီလမှာတော့ဂျီဘရောလ်ရဲ့ဥပဒေသစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သွားလေ၏ "ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းဥပဒေ" ဟုခေါ်။ ဒီဥပဒေသစ်နှင့်အတူတစ်ခုမှာအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မတိုင်မီအာမခံချက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဖန်တီးရန်လိုအပ်ချက်များ၏ဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ပုဂ္ဂလိကရိုးအမြစ်ကိုဝယ်ရောင်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်တရားစွဲဆိုဖို့ဒါမှမဟုတ်ပညတ်တရား၏တစ်ဦးတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရနိုင်သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။
• လုံးဝနိုင်ငံခြားရေး: အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းနိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
• ထိန်းချုပ်ရေး: A တည်ထောင်သူအဆိုပါပဋိညာဉ်စာတမ်းပြင်ဆင်ရေး, လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပြီးကောင်စီဝင်, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများအများ၏အခွင့်အရေးကိုကန့်သတ်နိုင်သည်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
• အစဉ်အမြဲဘဝက: အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းအစဉ်အမြဲ (အစဉျအမွဲတစ်သက်တာ) ရှိနိုင်ပါသည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနိုင်ငံခြားကြွေးမြီစုဆောင်းရာမှကာကွယ်ထားပါသည်။
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: တည်ထောင်သူရဲ့အမွေခံန့်အသတ်စဉ်မြေးဆက်အဘို့အကြိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: ဂျီဘရောလ်င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့်အတူဗြိတိသျှနယ်မြေတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" က၎င်း၏အမည်သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "FDN" ၏အဆုံးမှာပေါ်လာရကြမည်။
ဧပြီလအကျိုးသက်ရောက်မှုလုယူသော 2017 ၏မတ်လအတွင်းဂျီဘရောလ်ပါလီမန်ကအတည်ပြုပညတ္တိကျမ်းအဖြစ် "ဖောင်ဒေးရှင်းက" အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်:
တစ်ဦးကသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity •;
•တရားစွဲမှု file ဖို့နှင့်ဥပဒေတစ်ခုတရားရုံးတွင်တရားစွဲခံရနိုင်ပါလိမ့်။
•ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း - တစ်မိသားစုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်း,
•အိမ်ရာစီမံကိန်း - အမွေဆက်ခံသူဆက်ခံအာမခံနှင့်များစွာသောသားစဉ်မြေးဆက်များအတွက်တိကျသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအကြိုးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်ဆောင်ဖို့အဖြေတစ်ခု;
အကြွေးစုဆောင်းမှုများ•ကာကွယ်ခြင်း - ပိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်သည်နိုင်ငံခြားကြွေးမြီ collection များကိုများ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အထိရောက်သောဥပဒေရေးရာ tool ကို; နှင့်
•အခွန်အနည်းငယ်မျှသာ - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွန် minimize တစ်လမ်း။
(က) တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းကပဋိညာဉ်စာတမ်းမှတည်ထောင်သူအဖြစ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏အမည်အား Subscribe;
(ခ) ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူအခြေခံအုတ်မြစ်ပဒေသာပင်များလည်း; နှင့်
(ဂ) ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ယင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ 13 နှင့်အတူလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။
တိုင်းအခြေခံအုတ်မြစ် Foundations ၏မှတ်ပုံတင် (မှတ်ပုံတင်) နဲ့မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိဆံ့မည်သည့်တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းမှတ်ပုံတင်မည် (မှတ်ပုံတင်မည်) ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်:
(က) Foundation ၏အမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်;
(ဂ) ကောင်စီဝင် '' အမည်များနှင့်လိပ်စာများကို;
(င) မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ; နှင့်
(စ) Foundation ၏ပဋိညာဉ်စာတမ်း, ကနဦးပဒေသာပင်များလည်းအသေးစိတ်ကို, ထိုပဒေသာပင်များလည်း (ပိုင်ဆိုင်မှု) ၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ၏ကောင်စီဝင်များက notarized အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သူတို့အဘယ်သူမျှမအခြေအနေများရှိခဲ့
ကအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများများ၏အခွင့်အရေးနှင့်အတူ, စီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံ, တည်ထောင်သူများ၏ဆန္ဒကိုသည်ကောင်စီဝင်များ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်, အုပ်ထိန်းသူကိုဖော်ပြရန်လိမ့်မည်ဟုတစ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းရေးအသင်းတစ်ခုကုမ္ပဏီ၏ဆောင်းပါးများအလားတူပြုမူပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစဖယ်ရှားရေးအပေါင်းတို့နှင့်ပါတီအစားထိုးနှင့်၎င်း၏သက်တမ်း၏ကြာချိန်ကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
(ခ) တည်ထောင်သူရဲ့အမည်နှင့်လိပ်စာ (တည်ထောင်သူတစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity လျှင်မှတ်ပုံတင်နှင့်အရေအတွက်အရပျ);
(ဂ) ဖောင်ဒေးရှင်း '' ရည်ရွယ်ချက်များ;
(စ) ကိုတည်ထောင်သူသို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့် (ရည်ရွယ်ချက်အပါအဝင်) ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပြင်ဆင်ရန်ပါဝါ;
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ designated ပါလိမ့်မည်မည်သို့ (ဆ);
အသက်တာ၏ (ဇ) ကာလ (အတိအကျအချိန်ကာလသို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲရှိမရှိ);
(ဈ) မှတ်ပုံတင်ဒေသခံရုံးလိပ်စာ; နှင့်
ဂျီဘရောလ်အတွက်ဖြစ်စဉ်ကိုလိပ်စာ (ည) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ (ထိုမှတ်ပုံတင်ရုံးကနေမတူညီတဲ့လျှင်) ။
ဖောင်ဒေးရှင်းမှစည်းကမ်းများ - အခြေခံအုတ်မြစ်များပြေးနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသဖြင့်ယောက္ခမတစ်ဦးကုမ္ပဏီ၏အလားတူပါဝင်မည်ဖြစ်သည်ဖောင်ဒေးရှင်းစည်းကမ်းများဖြစ်သောလိမ့်မည်ဟုခေါ်ဝေါ်:
(က) ကောင်စီဝင် '' လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖော်ပြပါ;
(ခ) ခနျ့အပျ, နှုတ်ထွက်စာနှင့်ကောင်စီဝင်များ၏ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ;
(ဂ) တစ်ဦးအုပ်ထိန်းသူခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (လိုအပ်ပါက), နှုတ်ထွက်စာနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားထိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ;
အခြေခံအုတ်မြစ်မှဂုဏ်သတ္တိများ၏အနာဂတ်ပဒေသာပင်များလည်းအဘို့အ (င) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ;
(စ) အခြေခံအုတ်မြစ်များတက်အကွေ့အကောက်များသောအဘို့အလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ; နှင့်
အခြေခံအုတ်မြစ်လွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာမဆိုလိမ်လည်မှုပျက်ကွက်, ပိုင်ဆိုင်မှုသူတို့ကိုအပြည့်အဝခေါင်းစဉ်နှင့်အတူအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ဟာတည်ထောင်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေရန်ငြိမ်းလိမ့်မည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စည်းကမ်းများနှင့်အတူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းက 2017 ၏အက်ဥပဒေနှင့်၎င်း၏ပြင်ဆင်ချက်များပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအောက်တွင်အညီသူတို့ကိုဖြန့်ဝေသည်အထိပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်များပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖောင်ဒေးရှင်းပဋိညာဉ်စာတမ်း, ဖောင်ဒေးရှင်းမှစည်းကမ်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းက 2017 ၏အက်ဥပဒေနှင့်၎င်း၏ပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အညီစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကဖောင်ဒေးရှင်း, တရားမဝင်အကျင့်ပျက်, ဒါမှမဟုတ်ဂျီဘရောလ်ရဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်အတူဆန့်ကျင်ထဲမှာမနေသောမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထူထောင်နိုင်ပါသည်။
တိုက်မြစ်သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှု settlors ၏တည်ထောင်သူထက်ကွဲပြားခြားနားသော, အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုတစ်ဦး FC အသင်းသို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမရွှေ့သူကလူဝန်ခံကြပါဘူး။ ပေမယ့်, သူသို့မဟုတ်သူမသူတို့ကိုချင်သင့်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ထောင်သူအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အခွင့်အရေးနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, တည်ထောင်သူအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အခွင့်အရေးများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ပေလိမ့်မည်။
(ဂ) ကောင်စီဝင်ကိုခနျ့အပျသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပါဝါ; နှင့်
တစ်ဦးကအကျိုးခံစားခွင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်သူတစ်ဦးချင်းစီသည်။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းပဋိညာဉ်စာတမ်းအကြိုးကြေးဇူးမြား၏တိကျသောအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါပဋိညာဉ်စာတမ်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းတာဝန်များ, အခွင့်အရေး, သို့မဟုတ်အင်အားကြီးတိကျတဲ့မည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းတကာလက်မခံနိုင်သောအပြုအမူသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌သရုပ်ဆောင်တစ်ကောင်စီဝင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်လို့မရပါဘူး, သို့မဟုတ်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သော liabilities များအတွက်လျော်ကြေးခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထား Foundations ၏မှတ်ပုံတင်မည်တိုင်းကောင်စီဝင်များ၏အမည်များပါဝင်ရမည်။
ပြည့်စုံခဲ့ပြီး, သို့မဟုတ်ပါကဆုကြေးဇူးကို၏ဝိညာဉ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်သတ်မှတ်ထားသည့်လမ်းညွန်နှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, ဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးအတှကျအသုံးပြုမှုများကိုပျက်ကွက်သည့်အခါတစ်ဦးကဂျီဘရောလ်တရားရုံးဖောင်ဒေးရှင်းပဋိညာဉ်စာတမ်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြင်ဆင်ရန်အသနားခံနိုင်ပါသည်။
တိုင်းတိုက်မြစ်မှတ်ပုံတင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာဖျောနှင့်ကောင်စီဝင်များ၏အမည်များနှင့်အုပ်ထိန်းသူအားစိစစ်နှင့်အတူနှစ်စဉ်ပြန်လာ file ပါလိမ့်မယ်။
အမှီတကဲအားလုံးရန်ပုံငွေများပတ်သတ်ပြီးအနည်းဆုံး5နှစ်ပေါင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရင်းကိုင်စံနှုနျးမြားအညီသင့်လျော်သောစာအုပ်များစောင့်ရှောက်မည်အသုံးစရိတ်များ၏လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများနှင့်အတူအသုံး, ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းများအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities ၏လက်ရှိစာရင်းကိုင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးမှတ်တမ်းများမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထားရှိမည်လိမ့်မည်။ ကောင်စီဝင်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအားလုံးမှတ်တမ်းများစစ်ဆေးခြင်းခွင့်ရှိသည်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးအမြစ်ကိုအခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများကဲ့သို့တူညီသောကုသမည်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင်အားလုံးအကျိုးအမြတ် 10% သောကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းများမှာသို့မဟုတ်တစ်တိုင်းပြည်အခွန်ကမ္ဘာကြီးဝင်ငွေမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူကိုရှယ်ယာရှင်များကသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရမယ်: သတိပြုပါ။
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိများ၏မှတ်တမ်းများအများပြည်သူမှတ်တမ်းများဖြစ်ကြသည်။ တည်ထောင်သူ, ကောင်စီဝင်များနှင့်အုပ်ထိန်းသူများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ '' အမည်ပဋိညာဉ်စာတမ်း၌ရှိကြ၏မဟုတ်လျှင်သို့သော်၎င်းတို့၏အမည်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
တစ်ဦးကဂျီဘရောလ်ပုဂ္ဂလိကဖောင်ဒေးရှင်းကအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားပျော်မွေ့နိုင်သည်စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, တည်ထောင်သူထိန်းချုပ်မှုသည်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှု, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, အစဉ်အမြဲဘဝရဲ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး, အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။